Dual Camera နဲ့ အဆင့်မြင့် နောက်ဆုံးထွက် Processor ပါဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်း - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
Dual Camera နဲ့ အဆင့်မြင့် နောက်ဆုံးထွက် Processor ပါဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်း
Dual Camera ခပ်မိုက်မိုက်နဲ့….
Qualcomm ရဲ့ Snapdragon Processor ထဲမှာ အဆင့်မြှင့်ပြီး နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Processor ရယ် RAM6GB ရယ် ပါဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို Blue Color အလန်းလေးနဲ့ သုံးချင်သူများအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Mi6ရဲ့ တစ်မူထူးခြားချက်များကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်….
အရင်ဆုံး ပြောရမှာက သူ့မှာ သုံးထားတဲ့ Processor အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Mi6မှာ တပ်ဆင် အသုံးပြုပေးထားတဲ့ Processor က Snapdragon 835 Processor ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ ဒီ Processor ကတော့ Snapdragon ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Processor ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတိုင်းမသုံးသေးဘဲ အသုံးပြုတပ်ဆင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းအရေအတွက် နည်းသေးပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က နားကြပ်ပေါက် ပါပဲ…
Mi6မှာတော့ နားကြပ်ပေါက် သီးသန့် ပါမလာတော့ပါဘူး။ USB Type-C Port မှာ တပ်ဆင်နားထောင် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Dual Camera …
Picture Perfect Dual Camera ဆိုပြီး ညွှန်းထားပါတယ်။ Dual Camera မှာတော့ 12MP နှစ်လုံးဖြစ်ပြီး Wide-Angle Lens တစ်လုံးနဲ့ Telephoto Lens တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ထည်ပိုင်းမှာလည်း Four-Sided 3D Curved Glass (ထောင့်အနားသတ်များ လုံးဝန်း) ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ ဘေးဘောင်တွေကိုတော့ Stainless Frame နဲ့ တည်ဆောက်ပေးထားပါတယ်။
ဘက်ထရီကတော့ 3350 mAh ဘက်ထရီ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ တစ်နေ့လုံး စိတ်ကြိုက်အသုံးခံတယ်လို့ ညွှန်းထားပါသေးတယ်။
Mi6မှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ အရောင်တွေကတော့ အဖြူ၊ အမည်း၊ အပြာ နဲ့ ငွေရောင် ဆိုပြီး (၄)မျိုး ထွက်ရှိလာ ပါတယ်။
Xiaomi Mi6ကို နီးစပ်ရာ ကျွန်တော်တို့ လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်များမှာ ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်သလို ယခု website မှလည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Mi6Blue Color လေးလည်း ဝယ်ယူလို့ ရနေပါပြီ ခင်ဗျာ..။ ဈေးနှုန်းကတော့ Mi6 (128GB) Blue Color – 650,000 ကျပ် ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ…။ Hot Line – 09453344800 မှလည်း ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါတယ်..။
More in this category: « “ ဈေးအသင့်အတင့်နဲ့ ယခုလထွက် စမတ်ဖုန်းသုံးချင်သူများအတွက် Huawei Y5 (2017) ” Samsung Galaxy J5 Prime »